Puntland: Madaxdii hay’adda Shaqaalaha Rayidka ah oo shaqada laga cayriyay
By WARIYAHA GAROWE ONLINE , Garoowe
GAROOWE, Puntland- Madaxdii hay’adda shaqaalaha Rayidka ah ee Puntland ayaa shaqadii laga eryay kadib markii lagu helay musuqmuusuq iyo inay hab qaldan u mari jireen nidaamka shaqaalaysiinta gaar ahaan boosask uu bixiyo Bangiga Adduunka.
Barlamanka Puntland ayaa todobaadkii hore u yeeray madaxda ugu saraysa hay’adda si wax looga weydiiyo eedaymo loo soo gudbiyay iyo cabasho ka imaanaysay dadweynaha.
Mudane katirsan Barlamanka Puntland ayaa GO u sheegay in shaqadii laga eryay xubno ay kamid yihiin Guddoomiyihii hay’adda Mustafe Siciid Shabac, ku xigeenkiisii Jaamac Xirsi Faarax iyo saraakiil kale.
Barlamanka Puntland ayaa sidoo kale shaqadii xafiiskaas hoos geeyay wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha taasoo laga codsaday inay sii wado shaqadii ay qaban jireen.
Dhinaca kale wasiir ku-xigeenka shaqada laga cayriyay Jaamac Xirsi Faarax ayaa sheegay in wax wada shaqayn ah aysan ka dhaxayn isaga iyo Guddoomiyahiisa, wuxuuna intaas ku daray in Guddoomiye Shabac uu yahay ninka eeda ugu badan qaadanaya dhibaatadana ka wada hay’adda.
''Hadaan anagu Wada shaqeyn waynay oo sharcigii lagu tuntay ma cabasho ka weyn baa jirta , waxaanu ka hadlayno waa dhib nahaysta iyo xanuun nahaya "Ayuu yiri.
Shabac ayaase eedayntaas codsaday in baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo.
Cabashada keentay in madaxdan shaqada laga cayriyo ayaa muddo dheer ka taagnayd gudaha Puntland, taasoo aysan madaxda ugu saraysa waxba ka qaban.
Musuqmaasuqa ayaa sare u kacay mudadii uu xafiiska joogay Madaxweyne Gaas, kaasoo saamayn ku faafay hay'adaha kala duwan ee dowladda islamarkaana ragaadiyay adeegyadii dadweynaha iyo howlihii danta guud.
DFS oo faah faahisay waxyaabihii looga hadlay shirarkii Garowe [Daawo]
Puntland 02.08.2018. 23:28
Wasiirka ayaa gunaanadkii waxa laga weydiiyay arrintii muranka badan dhalisay...
Cali Xaaji oo raali galin ka bixiyay qayb kamid ah waraysi laga qaaday
Puntland 16.07.2018. 01:29
Saraakiil ka tirsan Sirdoonka Soomaaliya oo la ruq-seeyay [SABABTA]
Soomaliya 20.09.2018. 13:41
Deni oo xilka la wareejiyay iyo Gaas oo faarujiyay Madaxtooyadda Puntland [Sawirro]
Puntland 14.01.2019. 12:05
Isbitaalka guud ee Garowe oo dib-u-habeyn lagu sameeyay
Puntland 04.07.2019. 15:52
Deni oo hogaan cusub u magacaabey Ciidanka Daraawiishta Puntland
Puntland 29.06.2019. 15:07
Deni: Ethiopian Airlines waxay PL ka bilaabeysaa duulimaadyo joogto ah
Puntland 14.06.2019. 18:54
Baahida loo qabo dib-u-howlgalinta hay'adda wadooyinka Puntland
Puntland 08.06.2019. 12:45
Farmaajo oo guddi u magacaabay wada hadaladda DF iyo Somaliland 17.07.2019. 18:23
Diblumaasiyiin u dhashay Turkiga oo lagu khaarijiyey Ciraaq 17.07.2019. 15:55
Dhimasho ka dhashay shil diyaaradeed oo ka dhacay Canada 17.07.2019. 15:25
Shir u dhaxeeya dowlada iyo beesha caalamka oo ka furmay Muqdisho 17.07.2019. 14:32
"Soomaaliya ayaa ugu cad-cad in ay ku guuleysato dacwad badda" 17.07.2019. 11:30
Muxuusan ninkan u jarin una dhaqin timahiisa muddo 40-sano ah? 17.07.2019. 10:53